शिक्षा – Page2– Nayadhar
रामपुर । पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाको बेझाडमा सञ्चालित रामतुलसी माध्यामिक बिद्यालयमा मन्टेश्वरी विधिबाट पठनपाठन हुने भएको छ । बिद्यालयले नानीबाबुहरुको इच्छा, चाहानालाई मध्यनजर गर्दै शिशुकक्षा, नर्सरी देखि एल केजी र युकेजीमा मन्टेश्वरीको सुबिधासम्पन्न ल्याउन थालेको हो । बालमैत्री रुपमा पठनपाठन गरी शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन मन्टेस्वरी सन्चालनमा ल्याउने विद्यालयले जनाएको छ । सरकारी स्कुलमा पुर्ब बालबिकास कक्षाहरुको नामले सञ्चालनमा ल्याउँदा यो पहिलो हुने छ । पढाईको...
प्रहरी चौकीकै वडा कार्यालयबाट नगद चोरी
पाल्पा । रैनादेवी छहरा गा.पा. ५ मुझुङका अधिकाँश स्थानमा चोरी भएको छ । वडा कार्यालयदेखि विद्यालय, पसलहरु विहीबार चोरी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । कालिका माविको अफिस चोडफोड गरी ठुलो मात्रामा नगद चोरी भएको हो । विद्यालयको दराजमा राखिएको ५० हजार चोरी भएको छ र त्यसैगरी वडा कार्याल एक हजार छ सय रुपैयाँमा चोरी भएको वडाध्यक्ष हुमानसिह कार्कीले बताए । अज्ञात समुहले नगद सहित चोरी गरी भौतिक क्षति गरेको छ । हाल चोरी गर्ने अज्ञात समुहको खोजी भएको जिल्ला प्र...
जातकै आधारमा कोठाभाडामा नदिएको विषयमा पाल्पाका दलित अधिकारकर्मीहरुले दोषी उपर कारबाहीको माग
पाल्पा । सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई जातकै आधारमा कोठाभाडामा नदिएको विषयमा पाल्पाका दलितअधिकारकर्मीहरुले दोषी उपर कारबाहीको माग गरेका छन् । दलित भएकै कारण कोठा भाडा नपाउनु नेपालको संविधानको मर्म विपरित भएको दलित अधिकारकर्मीहरुले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको हो । दलित अधिकारका लागि साँझा अभियान पाल्पा, नेपाल दलित संघ, उत्पीडित जातयि मुक्ति समाज, दलित मुक्ति मोर्चा, राप्रपा निकट दलित संगठन, दलित महिला संघ लगायतका संस्थाले कोठाभाडा नदिने काठमाडौंको सरस्वती प्रधानलाई...
पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले अनलाईनबाट पठनपाठन
पाल्पा । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले अनलाईनबाट पठनपाठन सुरु गर्ने थालेको छ । कोभिड १९ का कारण भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन नहुँदा विद्यार्थीहरु पढ्नबाट बञ्चित भएका थिए । निषेधाज्ञाकाले विद्यालयहरु बन्द भएपछि विद्यार्थीहरुको सिकाईलाई निरन्तरता दिन अनलाइन पठनपाठन गर्न लागिएको रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण बहादुर जिसीले बताए । पहिलो चरणमा कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीहरुलाई जुमबाट सिकाईमा निरन्तरता दिलाइने गाउपालिकाका अध्यक्ष नारायण जिसीले बताए । विद्यार्थीह...
पाल्पाली परिवार ओमनको एक लाख बढीको अक्षयकोष स्थापना
तानसेन । पाल्पाली परिवार ओमनले जिल्लाका ३ विद्यालयलाई १ लाख ३३ हजार बराबरको अक्षयकोष स्थापना गरेको छ । पाल्पा जन्मभूमी भएका र हाल कामको सिलसिलामा ओमनमा रहेकाहरुको संस्थाले तानसेन नगरपालिका वडा नं. ६ को कुनसरे आधारभूत विद्यालय र तानसेनकै गडसालको बालकन्या भगवती आधारभूत विद्यालयलाई ४१। ४१ हजार तथा रिब्दीकोट गाउँपालिकाको महेन्द्र जनता प्राथमिक विद्यालयलाई ५१ हजारको अक्षयकोष स्थापना गरेको हो । शनिबार एक कार्यक्रमका बीच संस्थाका कोषध्यक्ष शिवप्रसाद गैरेले कुनसरे आधारभूत विद्य...
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा सहभागी हुन आवेदन दिने विद्यार्थीको असार २० गतेभित्र आन्तरिक मूल्याङ्नका सबै कार्य पूरा गर्न दिर्देशन दिएकाे छ । बाेर्डले देशभरका जिल्ला समन्वय एकाइमा आन्तरिक मूल्याङ्नका सबै कार्य असार २० गते पठाउन पर्ने भनेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीको मूल्याङ्नका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि आइतबार पारित गर्दै असार २० गतेसम्ममा सबै विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन गरी पठाउने समयसीमा ...
एसईई परीक्षा स्थगित !
काठमाडौं । यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई नहुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले आन्तरिक मूल्यांकनबाटै नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसंगै एसईई परीक्षा नहुने भएको हो । विद्यालयहरुले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनका विवरण सम्बन्धित जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय समितिमा पठाउने र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउनुपर्नेछ । प्राप्त विवरणका आधारमा परीक्षा बोर्डले परीक्षाफल तयार पारेर सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको बोर...
एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित !
काठमान्डाैं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गरेको छ । बोर्डको सोमबार बसेको भर्चुअल बैठकले परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । अबको १५ दिनभित्र बोर्डका सदस्यहरुले परीक्षा मोडल तयार गरेर बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने र त्यही अनुसार परीक्षा मोडल सार्वजनिक गर्ने बोर्डले निर्णय गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण परिस्थिति जटिल बन्दै गइरहेकाले परीक्षा गराउन सम्भव नभएपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्म परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको बोर्डले जन...
रुपन्देहीमा उच्च ज्वरोले एक छात्राको विद्यालयमै मृत्यु
बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका नयाँ मिलस्थित प्यारामाउन्ट बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने एक छात्राको शनिबार मृत्यु भएको छ।कोरोनाको जोखिम हुँदासमेत विद्यालय सञ्चालन गरेको र उच्च ज्वरोकै कारण छात्राको मृत्यु भएको अभिभावकले बताएका छन्। विद्यालयको छात्राबासमा बसेर १० कक्षामा अध्ययनरत १५ वर्षीया प्रतिमा सापकोटाको मृत्यु भएको हो। २ दिनदेखि ज्वरो आएकी विद्यार्थी सापकोटाको उपचारमा विद्यालयले ध्यान नदिँदा मृत्यु भएको अभिभावकको आरोप छ। बालिकामा २ दिनदेखि ज्वरो र श्वासप्रश्वासमा स...
८ शिक्षकमा कोरोना देखिएपछि विद्यालय बन्द
काठमान्डौं। रुपन्देहीको कालिका मानवज्ञान माविका प्रधानाध्यापक सहित ८ जना शिक्षकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि विद्यालय बन्द गरिएको छ । करिब ८ हजार विद्यार्थी अध्ययरत रहेको सो बिद्यालयमा आफु सहित शिक्षकहरु कोरोना संक्रमणमा परेपछि विद्यार्थीलाई संक्रमणबाट जोगाउन विद्यालय बन्द गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णुहरी ज्ञवालीले बताए । कक्षा १० को परिक्षा संचालन भैरहेका कारण थप तीनदिन मात्र सञ्चालन गर्ने र अन्य कक्षा केही समय अनलाइनमार्फत संचालन गर्ने निर्णय विद्यालयले जनाए...